WAXAYAASHA, DENMARK, KORMEERKA 2, 2019 - YouTubers, nashqadeeyaha dhawaaqa, sawirada cod-bixiyaha, cinwaanada firaaqada iyo hal-abuurka kale ee ay ka mid yihiin filim sameeyayaasha doonaya inay ku soo qabtaan maqalka dhabta ah ee barnaamijyada xiisaha leh, ayaa hadda sameyn kara iyaga oo si sahlan uga mahadcelinaya soo-saarista cusub 4560 CORE Qalabka Mashiinka Mashiinka Dhagaha soo saaraha deenishka, DPA MAYKAROFOONADA.
Mashiinka cusub ee binaural-ka wuxuu soo bandhigayaa tayada sare ee codka oo alaabooyinka DPA ay caan ku yihiin caalami ahaan. Tayada xirfadeed ee makarafoonka ayaa u oggolaaneysa inay qabsadaan, waqtiga dhabta ah, sida saxda ah ee dhagti walba ay maqlayaan si kuwa dhageysiyada dhagaha dhegaha leh ay u dareemaan dhawaaq buuxa. Astaamahani waxay sidoo kale codsanayaan codsiyada kale sida dukumiintiyada nidaamka codka, falanqaynta muuqaalka, qiimaynta tayada codka, iyo dhawaaqa soosaarka masraxa ama ciyaarta, iyo kuwo kale. Jazz iyo fanaaniinta qadiimka ah ayaa sidoo kale arkay suurtagalnimada codkaan: duubista codka laga soo qaadanayo aragtida daawadayaasha halkii laga dhageysan lahaa dhagaystayaasha waa gebi ahaanba waddo cusub oo lagula wadaagi karo waaya aragnimada farshaxanada fanaaniinta taageerayaasha. Natiijadan, waa khibrad ugu dambaysa hareeraha.
Xuddunta DPA ee cusub ee '4560 CORE Binaural Madax-weyne' waa lammaane '4060 CORE Miniature Microphones' oo lagu dhejiyay laba dhegood oo dhegta ah isla markaana fadhiya meel ka baxsan kanaalka dhegta adeegsadaha (sida lammaarayaasha dhegaha). Tani waxay suurtagelineysaa in si toos ah loo qabto (1: 1) dhawaq uu maqlay qofka sameynaya duubista. Qabatooyinka dhegta waxay ku dhegan yihiin madax-dhejin dabacsan oo si fudud u habboon, u habboon in la xidho oo si fudud loogu habeeyo cabbiridda madax kasta oo shaqsiyeed. Shaashadda foolka waxaa la siinayaa mikrofoonnada codka lagu dhejiyo si ay u sugaan booskooda uguna fidiyaan waxyeellada buuqa dabaysha.
4060s waxay ahaayeen xulashooyinka xirfadyahano codad badan oo duubista codka sawirada dhaqdhaqaaqa waaweyn, sida Spider-Man: Hoyashada iyo Ergada: Suurto gal - Dhimasho. Sidoo kale waa xaqiiqo la ogsoon yahay in shaqsiyaadka xirmooyinka 4060 la iska dhex geli karo 'dhegaha' si loo sameeyo duubitaanno binaural aad u qancinaya. Hadda, waxaa jira xal dhammaystiran oo leh dhowr ah mikrofoonno taxaddar leh oo iskuxiraya kuwaasoo aad ugu dhow dhow xasaasiyadda.
Marka lagu daro in si fudud loo xirayo, 4560-yada waxay ku dhejin karaan qalabka wax lagu duubo, sida DPA ee MMA-A Digital Audio Interface, oo ku xirma qalab kasta oo aaladda-aaladda ah. Tani waxay siineysaa dadka isticmaala si ay u helaan xalal duuban oo dhaqsaha badan oo ku habboon duubista goob kasta.
"Rikoodhyada lagu sameeyay DPA's 4560 CORE Binaural Headset-ka waa mid sax ah oo dhagaystayaashu inta badan madaxooda jeediyaan iyagoo raadinaya isha codka," ayuu yidhi Maareeyaha Wax soosaarka DPA Rene Moerch. “Sida ugu habboon, waxyaabaha ku duuban alaabtani waa in lagu dhagaystaa iyada oo la adeegsanayo makarafoonka madaama waayo-aragnimada maqalku ay aad uga duwan tahay marka dib loogu soo celiyo khudbadaha stereo-ka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira farsamooyin bixin kara sixitaanka iyo kor u qaadista qaababka istcimaala iyo qaababka badan, taas oo sheygan ka dhigaysa mid faa iido u leh kuwa duubista filimka ee raba inay uruursadaan waxa ku jira codka jawiga.
Moerch wuxuu ku darayaa muuqaal kale oo waxtar leh oo ah DPA 4560 CORE Binaural Headset Microphone waa awooda ay ku khiyaanayso; makarafoonku aad ayuu u yar yahay in qof xirtay madaxa dhegaha ayaa u ekaan kara inuu xirto kaliya dhagaha dhagaha. "Tani wax weyn bay u noqon kartaa dadka wax ka qoraya deegaannada colaadda leh ee aan ammaan ama habboon ahayn in la tuso makarafoon," ayuu yidhi. "Soosaarka dhaqameed sida Podcast tusaale ahaan, duubista binaural waxay bixisaa waxyaabo aad u badan oo waxbaris ah, nool oo ku kalifaya marka la barbar dhigo farsamooyinka duubista dhaqameed."
DPA's '4560 CORE cusub' maktabadda Mashiinka Dhagaha ee loo yaqaan 'Binaural Headset Microphone' waxaa lagu qoray $ 1099.95 USD. Macluumaad dheeri ah fadlan booqo www.dpamicrophones.com/4560.
DPA Microphones waa hogaamiyaha sare ee "Professional Audio Audio" ee ka shaqeeya qalabka "microphones" oo tayo sare leh oo loogu talagalay codsiyada xirfadeed. Ujeedada ugu dambeysa ee DPA waa in ay marwalba siiso macaamiisheeda xalka ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee dhammaan suuqyadeeda, oo ay ku jiraan dhawaaqa nool, rakibid, duubid, masrax iyo warbaahin. Marka ay timaado geeddi-socodka naqshadaynta, DPA ma qaadato wax gaaban. Shirkadu sidoo kale kuma koobna nidaamkeeda wax soo saar, taas oo lagu sameeyo warshadda DPA ee Danmark. Natiijadu waxay tahay, alaabooyinka DPA waa caalam ahaan loogu ammaanay sharraxaad iyo sharafsanaan, sharaxaad aan kala go 'lahayn, kalsooni weyn, iyo, ka sarreeya dhammaan codadka saafiga ah, ee aan waxba galabsan oo aan waxba lumin. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan soo booqo www.dpamicrophones.com.
4560 CORE Qalabka Mashiinka Mashiinka Dhagaha Broadcast Engineer Broadcast Engineering DPA MAYKAROFOONADA Graham Chapman Prmoted toEditor Kuleyliyaha Nafaqada dhawaaqa is dhexgalka isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw codka ku wareejin Video Engineer	2019-12-02
Previous: 'DPA's' cusub '4560 CORE Binaural Headset Microphone' wuxuu si fudud u Dardar gelinayaa Codku Qaadashada Immersive
Next: KRK Edition Edition xadidan ROKIT G4 “Noise White” Kormeerayaasha Hada La Heli Karo